Nhau - Iron furniture shopping tips
Iron fenicha mazano ekutenga
Fenicha yesimbi yakanyatsokodzera kuiswa munzvimbo dzakawanda dzakadai semabhakoni, makamuri ekurara, makamuri ekugara, etc. Iron fenicha ndiyo inonyanya kufarirwa zvigadzirwa zvinoda vanhu kushongedza imba, hofisi, zvikoro, bindu uye patio. Vanopa kumba chitarisiko chitsva chizere nechitarisiko chinoyevedza.
Saka ungatenga sei fenicha yesimbi yakagadzirwa? Fenicha yesimbi inofanira kuchengetedzwa sei?
Chikamu 1: Hunhu hwe wfenicha yesimbi yakaoma
Danho rekutanga rekutenga nekuchengetedza fenicha yesimbi kuziva nekunzwisisa kuti chii chinonzi iron inogadzirwa nefenicha. Mutsanangudzo yakapfava, fenicha yesimbi inoreva fenicha yakagadzirwa musimbi yakagadziridzwa zvine hunyanzvi uye simbi ndicho chinhu chikuru kana chidimbu chekushongedza.
1. The zvakaitwa simbi fenicha
Iyo midziyo yesimbi fenicha inonyanya simbi uye dzimwe nguva inosanganiswa nemucheka kana huni hwakasimba. Midziyo yakawanda pamba inogadzirwa chose nesimbi yakarukwa: matafura ekofi, zvigadziko zvemaruva, marongero egirazi rewaini, chibatiso chemukombe, waini nemakapu maraki, machira epant, chivezwa chakarembera pamadziro, kushongedza kwemadziro.
Mimwe fenicha yakagadzirwa nesimbi uye yakasanganiswa nejira uye sach yehuni sematafura ekudyira egirazi, zvigaro zvekutandarira, zvigaro zvekugadzira zvigaro, matafura edzimba, matafura epadivi pemubhedha, matafura ekumira kwehusiku etc.
Vese vari pamusoro pemidziyo yemumba vane hunhu hwakafanana; ndiyo nzira yavo yekugadzira simbi kuti vawane zvigadzirwa zvapera. Iyo simbi inogona kugadzirwa kuita akasiyana maumbirwo kuburikidza nekutsika, forging, casting, kuumba, kumonereka, uye welding. Pamusoro pekuwana kupera kwakatsetseka, iyo fenicha yesimbi inoda kurapwa kwechipiri senge electroplating, kupfapfaidza uye kupfekedzwa kwepurasitiki kwekurapwa kwepamusoro. Padanho rekupedzisira kuwana chigadzirwa chekupedzisira chakaitwa muzvikamu zvakasiyana, welding, screwing, pini uye dzimwe nzira dzekubatanidza dzinodiwa kuti uzviise.
2. Zvimiro uye kushandisa yemidziyo yesimbi
Yakagadzirwa simbi fenicha yakakodzera yemazuva ano-maitiro kamuri. Iwo maficha esimbi mabhenefiti makuru achienzaniswa nemamwe materail sehuni, girazi kana machira. Izvi zvinotevera sumo yakadzama yehunhu hwesimbi fenicha.
a) Anti-kuchembera uye chinhu chinogara kwenguva refu
Iron art furniture ine hupenyu hurefu hwebasa. Pamusoro pekuoma hunhu hwesimbi pachayo, iron art fenicha inogona kuvharwa nependi yependi kudzivirira oxidation inotungamira kune tsvina / ngura.
b) musanganiswa unoyevedza nezvimwe zvinhu
Fenicha yesimbi yakaitwa inozivikanwa nekubatanidzwa kwayo kwe "simbi + jira" uye "simbi + yakasimba huni". Hazvina mhosva kuti ndeipi nzira yekufananidza, iwe unogona kuwana dzakawanda dzakakodzera nzira dzinoenderana nesimbi fenicha, uye musanganiswa wese unopa yakasarudzika yekushongedza maitiro.
Ex: iron side table inogona kusanganiswa nemucheka sofa; tafura yesimbi yepadivi pemubhedha ine mubhedha wakavharwa nedonje.
Chikamu 2: 6 tips yekutenga fenicha yesimbi
Vanhu vakawanda vanofarira kuenda kunotenga fenicha yesimbi mumusika wefenicha, kubva pazvigadziko zvemarambi kusvika pamatafura epadivi pemubhedha, kubva pamagonhi esimbi anoroverwa kusvika kumahwindo esimbi. Asi tingasarudza sei fenicha yesimbi yakanaka?
1. Check zvinhu zvesimbi fenicha
Iron art fenicha ine zvakakosha zvakasanganiswa sesimbi - girazi, simbi - dehwe, simbi - yakasimba huni nesimbi - jira. Ngwarira kune zvinyorwa pakusarudza fenicha yesimbi. Iwe unogona kutanga nekubata, kutarisa ruvara, uye kutarisa kupenya. Zvigadzirwa zvesimbi zvinogadzirwa zvakanaka zvinowanzonzwa zvakatsetseka uye zvakakwenenzverwa, magadzirirwo emhando yechinhu haafanire kunzwa hasha pakubatwa, uye ruvara runofanira kunge rwakajeka.
2. Funga nezvemaitiro emidziyo yesimbi
Paunosarudza fenicha yesimbi, unofanirwa kufunga nezvemaitiro eimba yaunoda kushongedza. Kana imba yacho yakapendwa nemavara akajeka, fenicha yesimbi yaunosarudza inofanira kuva yakasimba musanganiswa wematanda nesimbi zvinhu fenicha; mavara acho anonyanya kubhuronzi negoridhe. Madziro machena anoenda nemhangura fenicha sekofi kana nesting simbi matafura, yegoridhe madziro art chivezwa.
3. Tarisa zvinyorwa zveiron furniture crafts
Paunenge uchitenga fenicha yesimbi, iwe kazhinji unofanirwa kutarisa kana zvikamu zvesimbi zvakabatwa ne-anti-corrosion, zvikasadaro fenicha iri nyore kuita ngura. Nyatsoteerera kana kurapa kwe-anti-corrosion kwemajoini pakati pezvigadzirwa zvesimbi kunoitwa zvakanaka uye kana pane zvikanganiso zviri pachena. Imwe fenicha ichashandiswa munzvimbo dzine hunyoro pamba senge marekeni ekicheni, maraki egirazi, matafura ekofi. Dzinofanirwa kurapwa nependi yekudzivirira ngura.
4. Lok pane zvakadzama mapatani yemidziyo yesimbi
Paunenge uchitenga simbi fenicha, teerera kune zvakadzama. Semuenzaniso, imwe fenicha yakashongedzwa nematombo. Muchiitiko ichi, nyatsoongorora kana hunyanzvi hwacho hwakatetepa uye kana pane akatyoka mitsara maumbirwo.
5. The welding of iron furniture
Iwo welding mapoinzi ezvigadzirwa zvakanaka zvesimbi fenicha hazvizove zvakabudikira. Tarisa kunaka kwesimbi yakagadzirwa fenicha, uye iwe unogona kurova welded chikamu chefenicha nechinhu chakaoma. Kana kunaka kwacho kwakanaka, mucherechedzo wekugogodza wakangofanana neruvara rwemari. Kana hunhu husina kunaka, kazhinji hunoratidza ruvara rune ngura.
Imwe nzvimbo ndiyo inonyanya kutariswa sepakati pemakumbo etafura uye matafura epamusoro kana ari matafura ekugara.
Nguva yekutumira: Zvita-10-2020
Metal Garden Decoration, Modern Garden Art, mwenje wekushongedza, mwenje wezuva, Garden Decor Metal, mwenje wakatungamirira,